Umhla My Pet » Dating yokuziphatha
ukubuyekezwa: Oct. 21 2020 | 4 min ukufunda
Omnye wabahlobo bam eyindoda wandixelela ukuba naye wakha yomhla intombazana owabonisa phezulu ukunxila ngomhla wokuqala waza kukuhlanza bonke phezu kwakhe! Nangona ngombulelo andizange baye babona ukuba ndiqinisekile siye sonke kwafuneka imihla ukuba elixeshalibi nje okungenanto, apho umntu wenza into engafanelekanga ngokupheleleyo kwaye nje babenqwenela emhlabeni wayeza kuvulela wabaginya kuwe yonke. Ke mna intle ukuba sonke sikhe isabelo sethu fair yarhoxiswa ngomzuzu wokugqibela kwaye mhlawumbi ukuba wema. Plus siye zonke weva amabali mabi malunga nemihla yokuqala ukulahleka. Ngoko ke yintoni uye ephosakeleyo kwezi meko yaye njani inokuphetshwa. bonke kufikwa phantsi amagama amabini ezincinane 'efowunini ukuthandana'.
Yintoni ukuthandana yokuziphatha? Kulungile ndicinga ukuba njengoko ngeseti yezikhokelo azithethwa ezivumela amava ukuthandana ukuya kakuhle kwaye kuba mnandi kakhulu ukuba bobabini abantu abakulento. Kunjalo asinakuze ukulawula ntoni omnye umntu, ngoko ungakhetha kuphela kuba noxanduva ukuziphatha kwethu, kwaye ndiyakholwa ukuba xa ukhetha ukuba ukunyanga omnye umntu kakuhle nembeko ukuthandana yokuziphatha ke ngoko siya kuba ngamava kakhulu mnandi ngakumbi elilawulekayo kwabathandanayo ngokwethu. Plus ukuba ikhowudi yokuziphatha ngokwethu kunokusinceda ukuba sibe ekhuselekileyo.
Ukuthandana yokuziphatha ziquka izinto ezifana bakubize xa, kangaphi umyalezo omnye komnye, enoba ukuphendula umyalezo yefowuni abalinqulayo, Timings kunye awuqini ngenxa nemihla, izinto ozinxibileyo, koko xubusha ngomhla wakho, xa ukufumana emzimbeni, kodwa okona kubalulekileyo sibaphathe njani omnye umntu uze ulindele ukuba aphathwe ngendlela. Njengoko ubona ikwaquka ubanzima uluhlu olubanzi imiba kwaye ngoko ke kuba kunzima kwaye ayilandeleki. Plus uya kufumanisa ukuba abantu zonke iintlobo iimbono ezahlukeneyo izinto kwaye ayikho nokuziphatha ngendlela efanelekileyo xa kuziwa ukuba uthandane, kwaye ngoko ke eyona nto engcono kukwenza zenze iseti eyakho nezikhokelo kunenzela lona, uze unamathele kubo. Wakuba okunene uphume khona nomhla omnye umntu unako ezinye share izikhokelo zakho nabo ukuba bakhetha ukwenza njalo, baxoxe ukuba uqinisekise ukuba zombini wonwabe nangokuvumelana ukuba ukuthandana njani omnye komnye ngobulungisa. Oku kuquka ukunyaniseka iyonke kunye kwinqanaba elithile ukuqola evela bobabini abantu. Ndiyakholwa ukuba abantu benza oku kudla phi ntlungu iza iphetshwe.
LokuQala phambili nangona, bagcina ukuthandana yokuziphatha kukuba wena. Xa baziphathe ngendlela siziva ezilungileyo siqalisa kukholiswa thina nokuzeyisa intlonipho kunye nokuzixabisa lwethu.
Umzekelo ukuze ubone ukuba uchubekile ukuvumela umntu sele yomhla kanye ndiyazi ukuba wena uza kuphinda niwabone, okanye unokugqiba ukuba oku kuyimfuneko. Ukuba libhinqa u usenokukhetha ukuba akuyi ngesondo ngomhla wokuqala kuba elikulungeleyo nawe kungcono ukulinda ude wazi ngcono umntu. Okanye usenokuba iimvakalelo ngamandla kakhulu malunga asigcinwanga belinde ngemihla okanye imiyalezo zabuyiswa. Aba ngaba zonke ziphantsi 'efowunini ukuthandana'.
Nazi ezinye izikhokelo amahle asezantsi ukuba abantu abaninzi bakhetha ukulandela njengenxalenye ukuthandana yokuziphatha:
Yibani ngelinye ixesha imihla
Musa ukuma umntu phezulu ngomzuzu wokugqibela
Musa ngokwenene ukunxila ngomhla wokuqala
Musa ukuchitha ubusuku bonke ukuthetha ex yakho (ukuzamla)
Nxiba into efanelekileyo kumhla uzakuthatha
Musa ngokuzenzekelayo ukulindela ngesondo ngomhla wokuqala
Eneneni abantu abaninzi nje kubiza imbeko ngasentla. Kodwa ezinye yobucukubhede kancinane ukuthandana yokuziphatha kunokuba kakhulu kwindawo ezingwevu. Ngoko ke thatha ixesha lokucinga ngokwenene ngayo indawo nganye ukuthandana isigqibo imithetho yakho nezikhokelo ngalinye. Usenokuba wenze nesikhokelo ukuba aniyi amadoda umhla na ukuba nime phezulu ngomzuzu wokugqibela, okanye ukuba aniyi umhla abafazi kwexesha kakhulu. Mhlawumbi ungagqiba ukuba bangazinxiba izikethi exukusha ngomhla ukuba umfazi kuba ufuna ukunika uluvo ngakumbi i'St. Ezi zikhokelo ziya kuba khe njengoko wena into ebalulekileyo kukuba ukufumana ecacileyo ngento kakuhle ukuba yintoni na kunikholekisa uwedwa.
Ngoko uyisebenzisa njani xa umntu esenza into musa nga ni? Yintoni onokuyenza xa umntu waphula omnye imithetho yakho? Njengoko kukhankanyiwe phambi asikwazi ukulawula omnye umntu uziphethe njani yaye ngaba sifuna. Ngoko ke phantsi kuwe into yokuba ukulungele ukwamkela nalapho uya kusondela umgca. Ngokomzekelo, ukuba omnye izikhokelo wakho ukuba awufuni ukuba besilindele umhla, kwaye unalo umntu kwexesha, ingongoma yakho lokuqala umnxeba ukuba ubazise indlela ovakalelwa ngale. Ungakwenza oku ngendlela non ugxeke, ngendlela ecacileyo ngokwabelana ngokulula uvakalelwa kwaye ukuba ayikho into ofuna kubudlelwane ukuthandana njani. Kodwa kuthekani ukuba ngokuphindaphindiweyo ikhwela umgca yakho? Kulungile kuya kufuneka wenze isigqibo nokuzimaseka ukuba kwanele ngoku. Ukuba ngenene ca wena awukwazi ukunyamezela ukuziphatha loo mntu nje akuyi kuba sempilweni entle kuwe. Emva kokuba ekwabelwana ukuba uziva njani ukuba niphikele ukwenza oko kuya noba kufuneka kukuyeka wonwabile kwaye uhlaziye isikhokelo sakho ngokwakho, okanye kuya kufuneka ukuba bahambe. Oku ube njani intembelo wena kunye nemida yakho.
Phawula ukuba inxalenye engundoqo, lonke eli nqaku ndiye ekubhekiselwe 'izikhokelo' kunokuba 'imithetho'. Oku kuba ndicinga kubalulekile ukuba ube ezinye bhetyebhetye kunye wena ngokwemiqathango ngokulinga nokubona ukuba uziva Kulungile na kuwe ukuba yintoni na ngokuqinisekileyo akwamkelekanga. Njengoko bekhula utshintshe njengomntu ngokunjalo namandla izimvo zakho malunga ukuthandana. Yiba bhetyebhetye, Kodwa xa usenzile oko kulungileyo ukuba nangaliphi na ixesha ndiyacebisa ibambelele ngokwemida lakho kunye ukuthandana yokuziphatha. Xa kuyaphula izikhokelo zethu isoloko ubuyela nomntana kuthi.